उदयपुरमा चट्याङ लागेर २ महिलाको मृत्यु – Taja Khawar
उदयपुरमा चट्याङ लागेर २ महिलाको मृत्यु
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ३०, २०७८ समय: ०:५४:१६
मंगलबार परेको बर्षा सँगैको चट्याङले उदयपुरमा २ जनाको ज्यान गएको छ । दिउँसो पानी सँगै परेको चट्याँङले लाग्दा त्रियुगा नगरपालिका ३ मुसहरी टोलकी २ महिलाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । धान रोपि रहेको अवस्थामा एक्कासी चट्याङ लागेर घाईते भएकी उनिहरुको जिल्ला हस्पिटल उदयपुरमा उपचार हुँदा हुँदै ज्यान गएको हो ।
मृत्यु हुनेमा ३९ वर्षिय ललिता सदा र ठाडी बस्ने ३० वर्षिय फुलकुमारी सदा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी) बेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभएको छ । अन्य समाचार :
अन्य समाचार : बच्चा जन्मिएपछि आमाको न्यानो काखमा हुर्कन पाउनु उनको नैसर्गिक अधिकार हो । यहाँका एक जना महिला सुत्केरी त भइन् तर उपचार खर्च तिर्न नसक्दा जनकपुरको एक निजी अस्पतालमा चार दिनदेखि बन्धक बन्नुपरेको छ । अस्पतालमा बन्धक बन्नुपर्दा बच्चाको स्याहारसुसार र सहजरुपमा आमाको न्यानो काखमा हुर्कन पाउन समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अस्पताल प्रशासनले उनलाई जनरल वार्डमा राखेर घर जानबाट वञ्चित गरेको छ । खातुनका ३१ वर्षीय श्रीमान् मोहम्मद समीर नदाफले आफन्त र गाउँमा अस्पताललाई तिर्नुपर्ने पैसा खोजे पनि पूरा रकम व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । लकडाउनका कारण देखाएर ऋण नपाउँदा उनी अस्पतालमा चार दिनदेखि घेरिएको नदाफले बताउनुभयो ।
नदाफले आज बिहान राससको कार्यालयमा आएर उपचार खर्च जुटाई दिनका लागि गुहार माग्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैतिर गाउँमा डुलेर श्रीमती र नवजात शिशुलाई अस्पतालको खर्च जुटाउनका लागि चन्दा मागें, अहिले रु. ५० हजार जति सङ्कलन भयो तर अझ रु. ६० हजार बाँकी छ । तपाइँको सञ्चारमाध्यमबाट उपचार खर्च जुटाउनका लागि सम्पूर्ण मनकारीसँग गुहार मागेको छु ।”
उता अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बिल बढेको बढ्यै छ । यता नदाफ भने पैसाको खोजीमा गाउँमा भौँतारिइरहनुभएको छ । “एउटा झोला र कापी लिएर हिँडेको छु”, दुःख सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनाको बेला घर नआउनुस् भन्दै कसैले चाहिँ टाढैबाट झोलामा पैसा हाल्दिनुहुन्छ । सबैको नाम र दिएको पैसा कापीमा टिपेको छु ।” नदाफले बसोबास गर्ने बस्तीमा पनि प्रायः सबै गरिब नै छन् तर, सकेको सबैले सहयोग गरेका छन् । प्रतिघर रु. २० देखि ५०० सम्म सहयोग प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । “यसरी कहिलेसम्म उपचार खर्च तिर्ने पैसा जम्मा हुने हो, पत्तो छैन”, मलिन अनुहारमा उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
शल्यक्रिया र औषधिका लागि ऋण खोजेर उहाँले करीब करीब रु. ५० हजार उपचारमा रित्याइसक्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब दुई रुपैयाँ पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।” यसरी श्रीमती अस्पतालमा छन्, श्रीमान् पैसाको खोजीमा गाउँ टोलमा भौँतारिँदै छन् । समीरले कुनै मनकारी मनले उपचार खर्चका लागि सहयोग गर्न चाहे ९८१८०२६४४० मा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो । बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्था अहिलेसम्म ठीक छ । तर उपचार खर्च चाँडो जुटाउन नसके गाह्रो हुनसक्ने उहाँको दुःखेसो छ ।
अस्पताल प्रशासनले बिरामीको आर्थिक अवस्था हेरेर केही छुट गर्न सक्ने तर सबै उपचार खर्च मिनाहा गर्न नसकिने बताएको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार दुवै बच्चालाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपरेकाले खर्च बढेको हो । अस्पतालले गर्नसक्ने जतिसक्दो छुट गर्नेछ ।
Last Updated on: July 14th, 2021 at 12:54 am